kaniisadda sii kordhaya Cuba ee!
Olof Amkoff, ilaa hadda saxda ah ee sawirka iyo Donald Appelfeldt aan bidix. Pastor Thomas Scull arkay naagtiisa Ruby iyo carruurtooda la: Sarah, Elizabeth iyo Tomasi.
1998 mamnuucay Itobiya isaga in ay sii wadaan in ay "cultos", cibaadada, oo xabsi ku jiray uu dhowr jeer.
On safar aan u Cuba, waxaan lahaa waqti iyo wareysi Kalle Appelfeldt Pastor Fernando Leyva, ka hor todobaadka dambe ku dhintay uu. Waxa uu u taagan dhexe ee la Kitaabka Quduuska ah ee gacanta.
Shuuciga iyo keenteen jabhada dagaalami Markis MPLA
Wuxuu ahaa communist ah oo la rumeysan yahay in kacaanka Castro iyo loo diray Angola si ay ula dagaalamaan kooxda ku dhuumaalaysiga Markis MPLA ka dhanka ah jabhada UNITA xiligii dagaalka sokeeye bilowday 1975.
Waxa uu la diriray muddo laba sano ah in Angola oo ahaa sarkaal firfircoon 10 sano. Oo ka mid ah 40,000 oo askari Cuba ee Angola, 15,000 oo dhintay, iyo markii Fernando loo soo sheegay in carmalna ma ama gargaar kale oo kasta oo la siiyo ka gablamay, ayuu sidaas oo ka niyad jabay iyadoo maamulkii iyo shuuciyad in uu joojiyay rumeeyaan oo labadoodaba waxaa ka.
Ahaa badbaadiyey ee aaska a
Marka gabadh 7-sano jir ah oo uu adeer ayaa dhintay sanadkii 1990, wuxuu ahaa goob joog ka aaska, oo waxaa ka mid ahaa, kuwaas oo ku wacdiyeen injiilka Ciise inuu yahay sarakicidda iyo nolosha. Markaasuu wuxuu ahaa badbaadiyey, iyo naagtiisii ​​bil ka dib.
Askar badan oo ka tirsan xisbiga uu badbaadeen, labada sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada iyo saraakiisha, laakiin dhicin dhawr inuu tago waxaa la si cad u sababta oo markaas ay rasaas.
A dhaqdhaqaaqe xisbiga dumar ah kuwaas oo lagu riixaya in ay isaga la xiray ee 1990, uu dhawaan la kulmay, markii ay isaga qudhiisu Christian a qirtay!
15 kaniisadaha evangelical
Fernando tababaray sida wadaad ah oo aasaasay kaniisadda ah evangelical ee magaalada gurigiisa ee Bejucal la 25,000 deggan. Markaasaa waxaa jiray in ay Kaniisadda Catholic iyo kiniisadda Baabtiisaha Itobiya saaxiibtinimo, labada fiqiga xoreynta. Hadda waxaa jira 15 kaniisadaha evangelical halkaas.
Ku jiray xabsigii
Laakiin wuxuu caayay ganaax iyo sii kulamadooda. Waxa uu si buuxda u lumay oo ay ka cabsi Itobiya iyo geesinimo marag furay rumaysadkoodii in "Masiix" ilaa uu dhintay todobaadkii hore.
Arkay markooda Cuba
Recently, wuxuu qabtay oo kaxeeyey weyn ee ciidanka in ay aaminsan yihiin. Waxa uu sheegay in our wareysi isaga la sheegay in uu ahaa "sharfay Pastor Thomas Scull (midig ee Fernando) kuwaas oo arkay Cuba ka gebi Dadwaynaha mulxidnimo jeestay badan ay nolosha 70-sano, Marxism, galaya, animism, in hadda leeyihiin kaniisadaha badan oo firfircoon Pentecostal oo evangelical agagaarka jasiiradda, ay jawaab u salaadda iyo dadaal our. Waxaan ka aamin in la dilo, inkastoo blacklisting iyo waxyaabo kale, laakiin Ilaah oofiyey ballamihii uu inoo! "
Sannadka soo socda, taliskii qori doontaa in ay ahayd 100 sano ka hor, dhaqdhaqaaqa Pentecostal si Cuba yimid. Waa in la telefishanka doonaa dhacdada iyo siiyey shir dhismaha ujeeddo ah!
Vecka 49, torsdag 9 december 2021 kl. 14:50